डचटाउन साना व्यवसायहरूका लागि अनुदान • डचटाउनस्टा.लि. • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
डचटाउन साना व्यवसायका लागि अनुदान
प्रकाशित जुन 3rd, 2020
नयाँ अनुदान उपलब्ध!
अनुरोध dutchtownstl.org/grants सेन्ट लुइस शहर द्वारा जारी गर्न सानो व्यवसाय अनुदान को नयाँ दौर को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्न।
तलको लेखले २०२० को ग्रीष्म inतुमा जारी अनुदानलाई जनाउँछ। यदि तपाइँको व्यवसायले ग्रीष्म overतुमा यी मध्ये कुनै एउटा अनुदान प्राप्त गर्‍यो भने, तपाइँ यस दौरको लागि योग्य हुनुहुने छैन। अन्यथा, योग्यता आवश्यकताहरू प्राय: उस्तै रहन्छन्। हाम्रो भर्खरको लेख पढ्नुहोस् थप जानकारीको लागि।
सेन्ट लुइस को शहर एक स्थापित गरेको छ सानो व्यवसाय अनुदान कोष COVID-4 द्वारा गम्भीर असर पारेका साना व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्न million 19 मिलियन डलर। $ 5,000 सम्मका अनुदानहरू उपलब्ध छन्।
आधा उपलब्ध अनुदान पैसा अवसर क्षेत्र वा छिमेकी पुनरुद्धार स्थिरीकरण क्षेत्रहरूमा व्यवसायको लागि आरक्षित छ। अधिकांश ग्रेटर डचटाउन एक वा यी दुवै क्षेत्रहरूमा पर्दछ।
वित्त पोषण प्राथमिकता COVID-19 संकटको समयमा कम क्षमतामा अपरेट गर्न वा अपरेट गर्न असमर्थ व्यवसायहरूलाई दिइन्छ।
अनुदान आवेदन सहयोग
यो छिटो लागू गर्न महत्त्वपूर्ण छ! अनुदान समितिले रकम वितरित गर्न जून १० देखि बैठक सुरु गर्नेछ।
डचटाउन साना व्यवसायहरूले यी अनुदानहरूको लागि आवेदन दिन मद्दत गर्न स्वयम्सेवकहरू DT2 ow डाउनटाउन डचटाउन मा हुनेछ छिमेकी इनोवेशन केन्द्र, 3207२०6 Meramec, शनिबार, जून am बिहान9देखि साँझ। सम्म।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको व्यवसायको संघीय कर्मचारी पहिचान नम्बर (FEIN), वा तपाईंको सामाजिक सुरक्षा नम्बरको साथ तयार छ यदि तपाईंसँग FEIN छैन भने।
हामी सकेसम्म धेरै हिंड्ने-आवेदकहरूलाई मद्दत गर्ने प्रयास गर्नेछौं, तर तपाईं एक भेटघाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ:
डाउनटाउन डचटाउन र यसका सम्बद्ध निकाय र स्वयंसेवकहरूले कर, कानूनी, वा लेखा सल्लाह प्रदान गर्दैनन्। व्यवसायहरूले पेश गर्नु अघि उनीहरूको आफ्नै कर, कानूनी र लेखा सल्लाहकारहरूसँग परामर्श लिनु पर्छ यदि उनीहरूसँग पेशेवर विशेषज्ञता चाहिने अनुदानको बारेमा विशेष प्रश्नहरू छन्।
यदि तपाईं DT2 को अनुदान सहायता घटनाको बारेमा अन्य व्यवसाय मालिकहरूसँग जानकारी साझा गर्न चाहनुहुन्छ भने, तिनीहरूलाई पठाउनुहोस् dutchtownstl.org/grants or फेसबुकमा घटना साझा गर्नुहोस्.
यदि तपाईं आफैले अनुदानको लागि आवेदन दिन चाहानुहुन्छ भने, तपाईं सक्नुहुन्छ सहरको वेबसाइटमा आवेदन दिनुहोस्। आवेदनहरू हाल स्वीकार गरिएको छ।
अनुदानको लागि योग्य हुन धेरै मापदण्डहरू छन्। निम्न प्रकारका व्यवसायहरू हुन् अयाेग्य अनुदानका लागि:
गैर नाफामुखी संगठनहरू
बैंक र वित्तीय संस्था
कानून फर्महरू र वकिलहरू
चिकित्सक, दंत चिकित्सक, सर्जन, optometrists, chiropractors, र पशु चिकित्सकहरू
बीमा दलाल र एजेन्टहरू
घर जग्गा दलाल र बिक्री एजेन्टहरू
वास्तुकारहरू, ईन्जिनियरहरू, र भूमि सर्वेक्षणकर्ताहरू
तपाईंको व्यवसायले निम्न आवश्यकताहरू पनि पूरा गर्नै पर्छ:
मार्च १ th, २०२० सम्म २ 25 वा कम कर्मचारीहरू छन्
मार्च १ th, २०२० को रूपमा सेन्ट लुइस व्यवसाय लाइसेन्सको मान्य शहर रहेको छ
राजस्वको सेन्ट लुइस कलेक्टरको शहरमा सबै भुक्तानीमा वर्तमान रहनुहोस् (सम्पत्ति कर, आय कर, पानी बिल, आदि)
पेचेक संरक्षण कार्यक्रम (पीपीपी) र आर्थिक चोट प्रकोप anण (EIDL) सहित साना व्यवसाय प्रशासन मार्फत संघीय COVID-19 कोष प्राप्त भएको छैन।
बन्द भयो वा COVID-19 र / वा शहरको परिणामको रूपमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारिएको छ "घर रहनुहोस् - आवश्यक गतिविधिहरू मात्र आदेश, स्वास्थ्य आयुक्तको आदेश संख्या 5"
रुचिको कुनै द्वन्द छैन, जस्तै सेन्ट लुइसका कुनै कर्मचारीहरूको शहर, निर्वाचित वा नियुक्त अधिकारीहरू, वा तिनीहरूको नजिकको परिवार)
तपाईंको व्यवसाय राम्रो स्थितिमा रहेको प्रमाणित गर्न, तपाईं लाइसेन्स कलेक्टरको कार्यालयमा कल गर्न सक्नुहुनेछ (314) 622-4528। तपाईको आय कर खाताको स्थिति जाँच गर्न सक्नुहुनेछ यसमा राजस्व कलेक्टरको साथ (314) 622-3291। कलेक्टरको कार्यालयले प्रमाणित गर्न सक्छ कि तपाईंको घर जग्गा कर, व्यक्तिगत सम्पत्ति कर, र पानी र अस्वीकार खाताहरू हाल छन्। कल गर्नुहोस् (314) 622-4111 ती सोधपुछका लागि।
तल दायर गरिएको DT2. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. Covid-19 र DT2. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
डचटाउन STL.org DT2 डचटाउन साना व्यवसायका लागि अनुदान